आर्थिक – List Khabar
आज फेरी बढ्यो सुनको मुल्य, २९ दिन यताकै महँगो!
2 weeks ago आर्थिक 0
काठमाडौँ – पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य आज पनि बढेको छ। आइतबार स्थिर रहेर दोस्रो दिन घटी तेस्रो र चौथो दिन बढेको सुनको मूल्य आज पनि बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपाली बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैंयाँले बढेको छ। जससँगै नेपाली बजारमा …
July 2, 2021 आर्थिक 0
शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य थप ५०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ५०० रुपैयाँले वृद्धि हुँदै ९१ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको हो । गत बिहीबार प्रतितोला ६०० रुपैयाँले वृद्धि हुँदै सुन बजारमा ९० हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।महासंघका अनुसार …
बिदेश मा हुनुहुन्छ? बिदेश बाट अब पैसा पठाउनुहोस यति धेरै बढ्यो बिदेशी मुद्राको भाउ
बिदेश मा हुनुहुन्छ? बिदेश बाट अब पैसा पठाउनुहोस यति धेरै बढ्यो बिदेशी मुद्राको भाउ आज शुक्रबार कुन देशकाे कति छ त नेपाल रास्ट्रबैंकको भाउ , जान्नुहोस यस्तो छ आजको बिनिमय दर आज असार १८ गते शुक्रबार पनि अमेरिकी डलरसहित धेरै देशको भाउ बढेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर …
May 24, 2021 आर्थिक 0
आज साेमबार घट्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ । आज सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्यमा सामान्य गिरावट आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज छापावाला सुन तोलामा १ सय रुपैयाँ घटेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज छापावाला सुन ताेलामा १ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला …